| အလှဆင် Automotive ဆကျဆံ အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
Topic: Auto-အရောင်းအ Making
10 ရက်အတွင်းကားအစီးမှတ်ပုံတင်ရန်ပျက်ကွက်မှုအတွက်ပြစ်ဒဏ်။ Koap ကြည့်။ ။ 12.1 §။ တစ်ဦးမော်တော်ယာဉ်မောင်းသတ်မှတ်ထုံးစံ၌မှတ်ပုံမတင်, ယာဉ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်လွန်သေးပါဘူး ...
အဆိုပါမျိုးဗီဇကိုထုတ်ပြန်ပေးဖို့ကုန်ကျစရိတ်ကဘာလဲ။ ကားများအတွက်ရှေ့နေများ၏ပါဝါ? ထိုအခါဝယ်ထို့နောက်မှတ်ပုံတင်ကနေဖယ်ရှားပစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်?
အဆိုပါမျိုးဗီဇကိုထုတ်ပြန်ပေးဖို့ကုန်ကျစရိတ်ကဘာလဲ။ ကားများအတွက်ရှေ့နေများ၏ပါဝါ? ထိုအခါဝယ်ထို့နောက်မှတ်ပုံတင်ကနေဖယ်ရှားပစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်? တစျထောငျအတှငျးရှိ Doverka, သင်ယုံကြည်စိတ်ချလျှင်သူကအားလုံးကိုလုပ်ပေးနိုင်တယ် ...
ကားတစ်စီးကိုအပိုင်းအစသို့မည်သို့လွှဲပြောင်းရမည်နည်း။ "မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်၏ရပ်စဲ။ " မော်တော်ယာဉ်ပိုင်ရှင်၏စွန့်ပစ်ခြင်းမှာမဟုတ်ပေမယ့်စွန့်ပစ်မထားဘူးအခါဤအရေးယူဆောင်ရွက်လိမ့်မည် ...
ကားဝယ်ယူသည့်အခါထပ်ခေါင်းစဉ်နှငျ့ဆကျသှယျဖို့ရှိမရှိ? ကျန်တဲ့အရာတွေအားလုံးကစိတ်ကျေနပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ပွားအဘယ်ကြောင့်ထိုအထုတ်စစ်ဆေး?
ကားဝယ်ယူသည့်အခါထပ်ခေါင်းစဉ်နှငျ့ဆကျသှယျဖို့ရှိမရှိ? ကျန်တဲ့အရာတွေအားလုံးကစိတ်ကျေနပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ပွားအဘယ်ကြောင့်ထိုအထုတ်စစ်ဆေး? gibedede အတွက် WMS ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်အတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရခဲ့ပြီးတစ်ထပ်ခေါင်းစဉ်ကြောင်း, ဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ...
အသုံးဝယ်ယူရောင်းချခြင်းယခုဖြစ်ပျက်နေသည်နှင့်အမျှ။ y က။ ကားတစ်စီး?
အသုံးဝယ်ယူရောင်းချခြင်းယခုဖြစ်ပျက်နေသည်နှင့်အမျှ။ y က။ ကားတစ်စီး? ယနေ့ကားတစ်စီး၏အကောင့်တွင် (မှတ်ပုံတင်များ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုပြောင်းလဲနေတဲ့) မပယ်ရှားသဖြင့်, ဒေသသည်အရေးမပါသည်။ IE ကိုသင်မော်စကိုကားတစ်စီးကိုဝယ်ယူနိုင်ပြီးဖြစ်ပါတယ် ...
မိခင်ကသူ့သားအပေါ် re-register ကားစေလိုသည်။ နှစ်ဖက်လှူဒါန်းခြင်း, ဝယ်ယူခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်ကြောင့်အမြတ်အစွန်းအောင်လုပ်နည်း။ ဒါမှမဟုတ်တူတစ်ခုခု ???
မိခင်ကသူ့သားအပေါ် re-register ကားစေလိုသည်။ နှစ်ဖက်လှူဒါန်းခြင်း, ဝယ်ယူခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်ကြောင့်အမြတ်အစွန်းအောင်လုပ်နည်း။ ဒါမှမဟုတ်တူတစ်ခုခု ??? ပိုကောင်းတဲ့ပိုက်ဆံ။ သို့မဟုတ်ရှေ့နေတစ်ဦးအာဏာကိုမကြာသေးမီကမေးခွန်းမကြာခဏအဖြစ်ပေါ်ထွန်း ...
မော်စကို 555 ခန်း, 777 သို့မဟုတ်မည်သည့်ပေါင်းစပ်ယခုမည်မျှရှိသနည်း
မော်စကို 555 ခန်း, 777 သို့မဟုတ်မည်သည့်ပေါင်းစပ်ယခုမည်မျှရှိသနည်း မည်သည့်စီးပွားဖြစ် MREO ကိုသွားနှငျ့သငျတစျခုလုံးအဆင်အပြင်ကိုပြောပြလိမ့်မယ်။ Ltd မှ, PAA, GMM, အ OOM နှင့် dudes ၏ကျန် Cool ... ။
အဘယ်အရာကိုစာရွက်စာတမ်းများ / ကားတစ်စီးခဝယ်ဖို့လိုအပ်လဲ?
တစ်ပတ်ရစ်ကားတစ်စီးဝယ်ရန်မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်ပါသလဲ။ သင်၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သည်မေးခွန်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်အမြဲတမ်းမေးသင့်သည်။ အမြဲတမ်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးပတ်စပို့ရှိသည်
ဒါကြောင့်ကားဝယ်ယူခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းများစာချုပ်ရပ်ဆိုင်းဖို့ဖြစ်နိုင်မလား? ဖြစ်ကောင်း, သင်ကကားအသစ်မဟုတ်ပါဘူးသူကားထဲတွင်ထင်မပါဘူးဆိုရင်ကရောဂါရှာဖွေဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများအတွက်ဝန်ဆောင်မှုဘူတာရုံမှလိုအပ်သောခဲ့စဉ်းစား ယူ. မရ ...
ကျွန်တော်အသေးစားအတွက်ကားတစ်စီးရနိုင်မလား။ ချုံကိုရောင်းလိုက်တဲ့အခါ 14 နှစ်မှ စ၍ သင်ပိုင်ဆိုင်သမျှကိုသူထံမှယူသွားသောကြောင့်အုပ်ထိန်းသူဌာန၏ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ဟင့်အင်း ...
ငါအပိုင်းအစဖို့ကားတစ်စီးကိုချွတ်ရေးသားဖို့အဘယ်အရာလိုအပ်သလဲ? အခန်းပေါင်း, Bershov သတ်သေ, PTSD, မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်နှင့်သူ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ငှားရမ်းထားသောအပေါင်းတို့နှင့်အတူယာဉ်ထိန်းရဲအတွက်တာဝန်ခံနှင့်ကားတစ်စီးကိုအခမဲ့လွှဲပြောင်းနေသည်မပေးပါဘူး ...
အကူအညီနဲ့အကောင့်လိုအပ်သောစက်ရောင်းချခြင်းကဘာလဲ? အခါအဘယ်သူပြင်ဆင်? ငါပဲဘယ်မှညာ (ရောင်းချရန်၏စာချုပ်), သူတို့ရဲ့ပုံစံမျိုးစုံ subscribe! UHP ဘယ်သူ့ကိုမှရန်မအသုံးပြုမှုရှိပါတယ်, ကားတစ်စီးမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများရောင်းချနေတယ် ...
စာရွက်စာတမ်းများမရှိဘဲစံချိန်အပေါ်တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ထားရန်ဘယ်လိုနေသလဲ? အဘယ်သူမျှမပြဿနာ ... မလိုပါဘူးပြော ... ငါ DOKUMENTOA မရှိဘဲနဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ် UCHT ON ထားရန်လိုအပ်ပါတယ် .... ထိုအခါသင်သည် (မစိတ်မသာညည်းတွား၏အိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားစေခြင်းငှါ ...
ဂျပန်အကောက်ခွန်ဂဏန်းတွက်စက်ပြီးပြည့်စုံ bullshit ကနေကားယူနစ်လောင်းကြေးအကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေး။ နေရောင် 1000 တုံးမှတက်၏အင်ဂျင်စွမ်းရည်နှင့်အတူ, အကောက်ခွန်အပေါ်ပညတ္တိကျမ်းဆုံးဖြတ်သည်။ ၏ EUR38.500% အထိတန်ဖိုးရှိ 54-x ကိုနှစ်စင်တီမီတာ ...
အဘယ်ကြောင့်အနက်ရောင်ဖယောင်းတိုင်? မကောင်းတဲ့ဓာတ်ဆီသို့မဟုတ်ချွတ်ယွင်းဖယောင်းတိုင်ကျပ်ခိုး၏ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အပူပိုင်းကျပ်ခိုးအစစ်ခံကြွယ်ဝလောင်စာ-လေထုအရောအနှောသို့မဟုတ်နောက်မှစက်နှိုးဖော်ပြသည်။ ခက်စတင်များနှင့်မတည်မငြိမ်, misfiring အကြောင်းတရားများ ...
VAZ 2114 ၏လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုတိုးတက်လာခဲ့သည်။ သို့မဟုတ်အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာအာရုံခံကိရိယာပြတ်တောက်သွားနိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်သမျှ! ဒီအတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းဖွင့်ထားတယ်!))) တင့်ကားကိုကြည့်ပါ - ယိုစိမ့်မှုရှိလား ??? အင်ဂျင်ကိုဆီဓာတ်ဆီပိုက်လိုင်းများကိုကြည့်ပါ။ ...
ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ "အချက်အလက်စာရွက်အရကားတစ်စီးရောင်းခြင်းသည်နှစ်ဆဖြစ်ပြီးမှတ်ပုံတင်မထားပါ" မဖြစ်နိုင်ဘူး မေးခွန်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပုံဖော်ပါဒါကြောင့်သင်ပြောသလိုပဲကားတစ်စီး ၀ ယ်ခဲ့တယ် ...
ဘယ်လောက်က re-register ကားကုန်ကျ ???
ကားတစ်စီးကိုသက်တမ်းတိုးဖို့ဘယ်လောက်ကျပါသလဲ ??? ကောင်းပြီ၊ အဆိုပါကြေးခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 500 ပွတ်ဖြစ်ပါတယ်။ + မှတ်ပုံတင် - ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 100, + အာမခံ, ပြောပါ 2500, ပေါင်း ...
အခြားလူတစ်ဦးအပေါ်ကားတစ်စီး၏သက်တမ်းတိုးဘို့လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများများ၏စာရင်းဘာတွေလဲ? ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမှတ်တမ်းများကနေဆုတ်ခွာ၏ MREO ကြေညာချက်တွင်ကားများအဘို့စာရွက်စာတမ်းများ (TCP နှင့်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်), ရောင်းချတဲ့စာချုပ် ...
ငှားရမ်းခြင်းကားအဘယ်နည်းကားတစ်စီးငှားရမ်းမှုကိုနားလည်ရန်မည်သို့နားလည်ရမည်နည်း။ ငှားရမ်းခြင်းသည်“ lick” ကြိယာမှနာမ်ဖြစ်သည်။ ငှားရမ်းခမှာကားတစ်စီးဝယ်ဖို့ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာကိုမှန်းဆ? ငါငှားရမ်းအပေါ်ကားတစ်စီးဝယ်, ဆိုလိုတာကသင်နေစဉ် ...
14 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,353 စက္ကန့်ကျော် Generate ။